दलित महिलाको सक्रियतामा नमूना बस्ती बन्दै - Marganugami Daily
Marganugami Daily Headline1 Headline2 Main News National social दलित महिलाको सक्रियतामा नमूना बस्ती बन्दै
लहान, २७ फागुन । केही वर्षअघिसम्म समस्यैसमस्याबाट थलिएको सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका–९ को दलित बस्ती अहिले भने नमूना बनेको छ ।
गाउँका दलित महिलाहरू संगठित रूप मै आयआर्जनको कार्यमा सक्रिय भएपछि दलित बस्तीको पहिचान नै फेरिएको छ । अरूको कुरा काट्न मै समय बिताउँदै आएका दलित बस्तीका महिलाहरू सामाजिक सुधारको कार्यमा जुटेपछि दलित पुरुषहरू मात्रै होइन अन्य समुदायका महिला र पुरुषहरू पनि उनी हरूलाई सघाउन थालेका छन् ।
केही वर्षअघिसम्म घरेलु हिंसा हुँदा समेत चुप लागेर बस्ने ती बस्तीका महिलाहरू त्यसविरुद्ध अभियान नै चलाएर लागेपछि अहिले घरेलु हिंसासँगै बाल विवाहमा समेत उल्लेख्य कमी आएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ ।
समग्र विकास सेवा केन्द्र लहानको पहलमा २०७३ जेठ महिनामा रामसीता सामाजिक परिवारमा आबद्ध गाउँका दलित महिलाले बस्तीका बालबालिका हरूका लागि विद्यालय भर्ना अभियान चलाएर यो वर्ष मात्रै २० जना दलित बालबालिकाहरूलाई विद्यालय भर्ना गराएको स्थानीय महिला सरिता सदाले बताउछ । यसका साथै सामाजिक परिवारकै सदस्यहरूको पहलमा दलित समुदायका २४ जनाले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् ।
उमेर पुगेकादेखि ४५ वर्ष सम्मका व्यक्तिहरूले समेत विभिन्न कारण नागरिकता बनाउन सकेका थिएनन् । सामाजिक परिवारका सदस्य समेत रहेका सरिता भन्छ – “हामीले सक्रियतापूर्वक पहल गर्दा २४ जनाले नागरिकता प्राप्त गरेका हुन् ।” यस्तै समाजिक परिवारकै पहलमा दलित बस्तीका ९ जना बालबालिका हरूलाई जन्मदर्ता बनाएर दिनाका साथै १० जोडीको विवाह दर्ताका लागि समेत पहल गरेको सरिताको भनाइ छ ।
सामाजिक परिवारकै सहयोगमा गाउँकै चौकमा एउटा चौतारा समेत निर्माण गरिएको छ । तत्कालीन गाविस कार्यालयबाट बजेट माग गरेर बस्तीमै सार्वजनिक भवन समेत बनाइएको स्थानीयवासी जितनी महराले जानकारी दिए ।
राज्यबाट प्राप्त हुने अधिकारबारे बोल्न नसक्ने व्यक्तिहरू अहिले सामाजिक परिवारकै माध्यमबाट गाउँमा चेतनामूलक विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनका साथसाथै आफ्ना समस्या निर्धक्क भएर राख्न थालेका छन् । अहिले गाउँका दलित समुदाय का व्यक्तिहरू आप्mनो कामकाज आफैं गएर कार्यालय हरूमा गर्न र गराउन समेत थालेका छन् ।
ती समुदायका व्यक्तिहरू सामाजिक क्षेत्रमा मात्र होइन, आयआर्जनको बाटोमा समेत अग्रसर भएका छन् । गाउँकै महिलाहरूको सक्रियतामा कृषक समूह गठन गरी जिल्ला कृषि कार्यालयबाट बीऊबिजन प्राप्त गर्नुका साथै जिल्ला पशु कार्यालयबाट पनि गोठ सुधारका लागि सामाजिक परिवारका ७ जना सदस्यले रु १५ हजारका दरले रकम प्राप्त गरेर बाख्रापालन र गाइपालन गरिरहेका छन् ।
बस्तीका २१ जना दलित र नौ जना पिछडा वर्गका गरी ३० जना सदस्य आबद्ध रामसीता सामाजिकका सदस्यले शुरुमा मासिक रु. ५० का दरले र अहिले मासिक रु १०० का दरले बचतसमेत गर्दैआएको समग्र विकास सेवा केन्द्रका उत्प्रेरक मञ्जुकुमारी महतो बताउछ ।
सदस्यहरूले मासिक रूपमा गरेको बचत रकम रु. ८५ हजार पुगेको छ । उत्प्रेरक महतो भन्छ, “बचत भएको रकम सामाजिक परिवारकै सदस्यहरूमा ऋण लगानी गर्ने गरेका छन् ।” यसले दलित महिलाहरूमा बचतसँगै ऋण लिने बानीको समेत विकास भएको महतोको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय दलित महिला हरूमा आएको परिवर्तन सराहनीय रहेको छ । स्थानीय अगुवा श्याम कुमार महतोले यहाँका दलित बस्तीका महिला को चेतना स्तरबाट अन्य ठाउँका महिलाले अनुशरण गरे छिट्टै सामाजिक रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गर्छ ।